Hebei Lubang Carbon Products Co., Ltd. dia nahazo mari-pahaizana mpamatsy Baosteel Union Steel.
HEBEI RUBANG CARBON PRODUCTS CO., LTD dia nahazo ny mpangataka baogang united steel noho ny fiaraha-miasa tsaratsara kokoa sy ny kalitaon'ny electrode grafita tamin'ny martsa, 2020. Vondron' Baogang natsangana tamin'ny 1954, dia toby famokarana vy lehibe any Sina sy ny tany tsy fahita lehibe indrindra toby indostrialy ao amin'ny ...
DUBLIN, NOV. 30, 2020 ny ”tsena electrode electrode momba ny 2027 - fiantraikany covid-19 sy famakafakana manerantany amin'ny karazana vokatra (hery lehibe, hery avo lenta, herinaratra mahazatra); Fampiharana (lafaoro arara elektrika, lafaoro ladle, hafa), ary ny jeografia ”dia nampiana amin'ny fikarohana ...
HEBEI RUBANG CARBON PRODUCTS CO., LTD dia namolavola ny firakotra antioxidant teknolojia vaovao ary nanohy ny volana okt.
Ny haitao fanosotra antioxidant ho an'ny electrode grafita, dia ampiasaina amin'ny electrode grafite an'ny fanaovan-jiro vita amin'ny lafaoro elektrika. dia avy amin'ny epoxy novolac, acetal ofisialy polyvinyl, asidra phosorika, karbôna silika, silicon-dioxide, fitambarana toy ny oksida aluminium, oxide ferric, nitron boron ...